Icebo lokucoca ulwelo kwiTikTok: Isihluzi 'sokwandisa' | XperimentalHamid
Icebo lokucoca ulwelo kwiTikTok: 'Yenza isihluzi'
Ngamana 9, 2021 by USasha Gohar
Isihluzi sobuhle kwiTikTok yinto ethandwayo kodwa ingxaki kukuba abantu abaninzi kubonakala ngathi abanayo. Aba ngabantu ekudala beyifuna kodwa abakwazi ukuyifumana.
Isihluzi sobuhle kwiTikTok yindlela elula yokuphucula umgangatho wefoto. Yenza izinto ezininzi kumfanekiso ukuwunika isazisi esitsha seentlobo. Ngelixa abantu abaninzi besebenzisa eli cebo ngenkululeko, abanye kubonakala ngathi abayifumani naphina kwiTikTok.
Icebo lokucoca ulwelo on TikTok:
Yintoni isihluzi sobuhle kwiTikTok?
Uyifumana njani iFilitha yobuhle kwiTikTok?
Uyisusa njani isihluzi sobuhle kwiTikTok?
Esi sisihluzo sexesha elizayo. Yinto enye yokuma ukuze ufumane zonke iintlobo zezixhobo zokuphucula iifoto. Ukuba isetyenziswe ngobulumko, eli cebo lokuhluza linokujika umgangatho wefoto ukuyisa kwelinye inqanaba.
Kule posi, ndiza kuthetha ngesi sihluzo ngokweenkcukacha. Ndiza kukuxelela ukuba yintoni le icebo lokucoca ulwelo nokuba ungalifumana njani. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ndiza kuthetha ngezizathu zokuba kutheni ungayifumani le filter kunye nokuba zeziphi ezinye iindlela. Ke masiqale ngaphandle kokuqhubeka.
Isihluzi sobuhle kwibhidi yeTikTok ebizwa ngokuba 'Yandisa isihluzi'. Olu hlobo lwecebo lokucoca ulwenziwo lubalulekile kwiindawo ezininzi zonxibelelwano, umzekelo, i-Instagram, iTikTok, kunye ne-Snapchat.
Akunakuba yinto ephosakeleyo ukuthi eli cebo liphakathi kwesihluzi esasetyenziswa kakhulu phaya. Yintoni le icebo lokucoca ulwelo, phofu?
Icebo lokucoca ngobuhle okanye Ukuphucula isihluzo, dlala ngokuchaseneyo kunye nemibala yomfanekiso wokuqala ukuyinika inkangeleko eyahlukileyo.
Into eyenzayo kukulungelelanisa ulusu olunomphumo wokuhombisa. Ngaphandle kwezinye iipropathi ezininzi zinokusetyenziswa kwimifanekiso usebenzisa le fayile.
Lilonke, esi sihluzo siyamangalisa njengoko sinjalo. Kodwa abantu abaninzi abakwazi ukuyifumana.
Esi sihluzi asifumaneki kubo bonke abasebenzisi beTikTok. Izizathu zoko azaziwa. Abo banesi sihluzo banokuyifumana ngokulula.
Kufuneka bayenze kukuya kwicandelo lekhamera. Kwicala lasekunene, ibha iyabonakala. Ukucofa kuyo sibona ezinye iindlela. Okwesithathu sisihluzi esonyusiweyo.
Ngokucofa kuyo, ungasebenzisa konke okubonelelayo. Kodwa uza kuthini ukuba awuyifumani kule ndawo?
Apha ungafunda elinye inqaku elinxulumene noko Isihluzi seTeleport
Kwimeko apho, uya kushiyeka unokhetho olunomda. Endaweni yecebo lokucoca ulwandiso, unokubona 'ubuhle becebo lokucoca ulwelo.
Icebo lokucoca ngobuhle lenza into ethi icocwe njengesihluzi. Kodwa isihluzo sobuhle asinakho ukhetho oluninzi njengesihluzi esonyusiweyo.
Oko kwathethi, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba into ibhetele kunenye. Icebo lokucoca ulwelo yinto ethile.
Ukususa isihluzi sobuhle kwiTikTok yinto efunwa ngabantu abaninzi kwiTikTok. Kodwa bangayenza njani loo nto?
Makhe ndibeke ngokulula: ungasusa isihluzo sobuhle kwezinye iimeko. Ukwenza oko, kuya kufuneka uhambe uye kwindawo apho ufake khona icebo lokucoca ulwelo.
Apha ungasusa isihluzi.
Icebo lokucoca ubuhle okanye lokuPhucula i-TikTok kunye nezinye izinto ezininzi zokusebenza yinto ebalulekileyo. Abantu bayisebenzisa ngalo lonke ixesha ukuphucula ukubonakala kweefoto kunye neevidiyo zabo.
Kule nqaku, ndithethe ngayo yonke into malunga nesi sihluzo. Ndiqale ngokukuxelela ukuba yintoni le icebo lokucoca ulwelo kwaye ungayisebenzisa njani. Ndiyathemba ukuba ufunde izinto ezimbalwa ngokufunda ezi ndawo zingasentla.
iindidi I-Tiktok tags Indlela yokuHluza ubuGcisa kwiTikTok, Yintoni iFilter yobuhle kuTikTok Post yokukhangela
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2776 - 2777
UkuSebenza kwesisu seTikTok: Ngaba kukhuselekile ukuyenza?